Raharaha QMM Tsy raharahian’ny fanjakana
Manana petra-bola 20% ao amin’ny QMM ny fanjakana Malagasy kanefa toa mitazam-potsiny ny olana manjo ity orinasa ity. Rantsan’ny orinasa matanjaka Rio Tinto izay miasa amina firenena marobe eto ambonin’ny tany ny QMM.
Fampandrosoana ny toekaren’i Madagasikara Sakana ny tsy fisian’ny firaisankina
Rariny raha saika voafehin’ny vahiny ary eo am-pelatanany avokoa ny toekaren’i Madagasikara. Tsy mba misy fiaraha-mientana sy firaisan-tsaina eto fa samy mandeha samy mitady ny ankamaroan’ny Malagasy.
Fampiroboroboana ny Indostria Tena mbola mila ezaka be i Madagasikara
Fanadihadiana atao amin’ny renim-pianakaviana Hiantraika amin’ny fanapahan-kevitra ara-toekarena
Omaly alarobia 8 aogositra no nampahafantarina tetsy amin’ny minisiteran’ny toekarena sy ny teti-pivoarana ny fisian’ny fanadihadiana nasionaly voalohany atao amin’ny renim-pianakaviana anatin’ny tokantrano miisa 21 000 eto Madagasikara.
Maorisy-Madagasikara Hifampizara traikefa amin`ny ladoany Malagasy
Tonga nitsidika tamin’ny fomba fifanajana ny praiminisitra Ntsay Christian, ny Ambasadaoron’i Maorisy eto Madagasikara, Sem Goburdhun Datakarran, omaly tetsy amin`ny lapan`i Mahazoarivo.
Vokatra Malagasy Misy tokony hahodina eto Madagasikara ihany
Manana ny faritra mampiavaka azy amin’ny famokarana i Madagasikara. Rehefa miditra ny fotoam-pahavaratra atsy ho atsy dia maro be indray izao ny vokatra hiakatra.
Ho an’ny mpitatitra entana sy ny “Transitaires” dia midika fanambaniana sy fanivaivana ary fivadiham-pitokosana tsotra izao no nataon’ny MICTSL, satria nandritra ny fihaonany tamin’ny minisitry ny fitaterana Ralava Beboarimisa dia misy tamin’ireo teboka milaza ny fitarain’izy ireo no neken’ny MICTSL fa hovahana. Nisy ny fihaonana indray ny faran’ny herinandro teo, fa nandamoka izany. Vokany, manambana ny hiroso amin’ny fitokonana tsy voafetra ireo mpitatitra entana sy “transitaires”, manomboka anio, raha tsy vita sonia ilay fifanarahana sy ny fitakian’izy ireo. Tsy maintsy hisy fiantraikany amin’ny fandraharahana sy ny ara-barotra eto amintsika izao fanapahan-kevitra noraisin’ny mpitatitra entana sy ny “Transitaires” izao, saingy tsy maintsy hirosoana ny fitokonana, hoy izy ireo mba hisy mpihaino amin’ny olana sedrainy izy ireo. Anisan’ny fitakian’ireo mpitatitra sy Transitaires ireto ny hanampian’ny MICTSL ny fitaovany, hanafainganana ny famoahana kaontenera ao amin’ny Port, fa miteraka fatiantoka betsaka ny fitarazohan’io famoahana entana io.